Ujeedada koorsadan waa in la soo bandhigo waxa cilmi nafsigu yahay, waa maxay qaybaha ugu muhiimsan, iyo meelaha kala duwan ee suurtogalka ah.
Arday badan ayaa iska diiwaangeliya shatiga cilmu-nafsiga iyagoo leh fikrad aan caddayn, xaddidnayn, xitaa fikrad khaldan oo ah waxa cilmi-nafsiga ee jaamacadda: waa maxay nuxurka la baraa? Ma runbaa inay jirto xisaab? Waa maxay shaqooyinka tababarka ka dib? Waxa laga yaabaa inay mararka qaarkood la yaabaan inay ogaadaan, casharradii ugu horreeyay, in aanay dhab ahaan u dhigmin wixii ay moodayeen.
Ujeeddadayada ugu weyni waa inaan si guud u soo bandhigno waxa ay yihiin cilmi-nafsiga iyo xirfadda cilmi-nafsiga, iyo sidoo kale meelo kale oo suurtagal ah. Sidaa darteed koorsadan waxaa loo arki karaa sida a Hordhac guud ee cilmi-nafsiga, dulmar aan dhammaad lahayn oo ku saabsan walxaha, hababka iyo qaybaha codsiga. Ujeeddadeedu waa in la horumariyo faafinta macluumaadka ee dadweynaha guud, in la siiyo hagitaan wanaagsan ardayda arrimahan, iyo ugu dambeyntii si loo gaaro guul wanaagsan.
Hordhac cilmu-nafsiga ee Jaamacadda Janaayo 9th, 2022Tranquillus
READ Sida loo abaabulo waxbarashadaada guriga
horeUjeedo guul: noqo arday heer sare ah!
socdaTababarayaasha shaqada-barashada ee da'da yar: Caawinta loo-shaqeeyayaasha ee door bidaaya shaqaalayntaada ayaa la kordhiyay ilaa Juun 2022
Kordhinta mushaharka shaqaalaha qaybta medico-social sector